एक कला संकलकले १० सेकेण्डको एउटा भिडियो ६७ हजार डलर (७८ लाख रुपैयाँ)मा किने !!! – News Nepali Dainik
एक कला संकलकले १० सेकेण्डको एउटा भिडियो ६७ हजार डलर (७८ लाख रुपैयाँ)मा किने !!!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: १३:२९:४८
तपाइँको सानो महेनत र त्यसमा लगानी गरिएको थोरै पैसाले कतिबेला भाग्य बदलिदिन्छ भन्न सकिन्न । २०२० को अक्टोबरमा अमेरिकाको मियामीका एक कला संकलकले १० सेकेण्डको एउटा भिडियो ६७ हजार डलर (७८ लाख रुपैयाँ)मा किने । उनले अहिले यो भिडियो बेचेका छन् । उनले अहिले यो भिडियो ६.६ मिलियन डलर (७७ करोड रुपैयाँ)मा बेचेका छन् ।
यो भिडियोलाई डिजिटल आर्टिस्ट बिपलले बनाएका थिए । बिपलको वास्तविक नाम माइक विंकेलम्यान हो । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार ब्लकचेन नामक संस्थाले यो भिडियो माइकले नै बनाएको प्रमाणित गरेको छ । यो भिडियो अर्थात डिजिटल एसेटलाई नन फंजिबल टोकन (एनएफटी) भनिन्छ । यसमा बनाउनेलाई पैसाको आवश्यकता भएको अवस्थामा यसको लागि कैयौं मानिसहरुले लगानी पनि गर्छन् ।
एनएफटी डिजिटल प्लेटफार्ममा नै रहन्छ र यदि यो कसैलाई मन पर्यो भने यसवापत करोडौं रुपैयाँ पाइन्छ । ब्लकचेन प्रविधिका कारण यस्ता भिडियोहरुको डुप्लिकेसन पनि हुन सक्दैन । यसलाई बेच्ने कला संकलक पाब्लो रोड्रिगुएन फ्रेलले भने ‘तपाइँ लोर्वे जानुस् मोनालिसाको पेन्टिङ हेर्नुस् । यसको आनन्द तपाइँ त्यहाँ मात्र लिन सक्नुहुन्छ । किनकि यस्ता कार्यको इतिहास त्यहीँ रहन्छ ।’ पाब्लोका अनुसार उनी बिपलको कामबाट प्रभावित थिए त्यसैले उनले भिडियो किनेका थिए ।
नन फंजिबल टोकन इन्टरनेटमा डलर, स्टक वा सुनजस्तै साट्न सकिँदैन । नन फंजिबल टोकन डिजिटल कलाकृति, स्पोर्टिङ कार्ड, भर्चुअल वातावरण, क्रिप्टोकरेन्सी वालेट नाम जस्ता कुराहरु हुन् । पाब्लोले जुन भिडियो बेचेका छन् त्यसमा डोनाल्ड ट्रम्प भुइँमा ढलेका छन् । उनको शरीरमा कैयौं ट्याटु बनेका छन् । नारा लेखिएका छन् । माथि ट्वीटरको चरा पनि बसेको छ ।
एनएफटीको मार्केटप्लेस ओपनसीका अनुसार फेब्रुअरी महिनामा ८६.३ मिलियन डलरको बिक्री भएको छ । गत वर्ष यो बिक्री १.५ मिलियन डलर मात्र थियो । ओपनसीका सहसंस्थापक एलेक्स अताल्लाहका अनुसार यो नयाँ नगानीको प्लेटफर्म बनेर अगाडि आएको छ । तर यहाँ जोखिम ठूलो छ । कुनै कलाको प्रशंशा भयो भने त्यसको मुल्य ह्वात्तै बढ्छ र कुनै हल्ला फैलियो भने त्यसको मुल्य ह्वात्तै घट्छ ।
Last Updated on: March 4th, 2021 at 1:29 pm